एयर इन्डियाकाे 'नमस्कार सेवा' सुरु, कस्ताे छ सेवा ? - Nepali Headlines,Nepal News, Nepali News, News Nepal
एयर इन्डियाकाे ‘नमस्कार सेवा’ सुरु, कस्ताे छ सेवा ?
१६ असोज, एजेन्सी । भारतको राष्ट्रिय ध्वजावहाक हवाई सेवा कम्पनी एयर इन्डियाले आफ्नो सेवालाई प्रभावकारी बनाउन नमस्कार सेवा सुरु गरेको छ । नयाँ दिल्ली विमानस्थलमा यात्रुहरुका लागि नमस्कार सेवा सुरु गरेको अधिकारीहरुले जानकारी दिएका छन् ।
त्यसैगरी यात्रुहरुलाई फाराम भर्न, सामान लैजान, वोर्डिङ पास उपलब्ध गराउनलगायतका अन्य आवश्यक सम्पुर्ण कार्यहरु कर्मचारीहरुले नै गरिदिने भएका छन् । नमस्कार सेवा अन्तर्गतका यी सेवाहरु प्रदान गरे वापत न्युनतम शुल्क पनि तोकेको कम्पनीले जनाएको छ ।
पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार गत अप्रिलदेखि जुनसम्ममा यस विमान कम्पनीबाट ८० लाख यात्रुले आन्तरिक र ३५ लाख यात्रुले अन्तर्राष्ट्रिय सेवा प्राप्त गरेका छन् ।
Previousदशैंको बेला दुःखद खबर, एकैदिन १० जना मृत भेटिए
Nextकरेन्ट लागेर दुई जनाको मृत्यु